အပူစုပ် - ထိုင်ဝမ် High Quality အပူစုပ် OEM / လိမ္မော်ရောင်ထုတ်လုပ်သူ | SHINING E&E INDUSTRIAL CO., LTD
အပူစုပ်ခြင်း / SHINING E&E စက်မှုကျော်ကို 35 နှစ်ကြာလျှပ်စစ် Terminal နှင့် Block ကို, ဖျူး Holder တစ်ခုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူ, ဖျူး Block ကို, Solid State Relay (SSR) ဖြစ်ပါသည်။
ဒင်ရထား Terminal နှင့်လုပ်ကွက်တပ်ဆင်ထား
Panel ကို Terminal နှင့်လုပ်ကွက်တပ်ဆင်ထား
ကြွေ (ကြွေ) Terminal နှင့်လုပ်ကွက်
နှစ်ချက် Layers (ကုန်းပတ်) Terminal နှင့်လုပ်ကွက်
နှစ်ချက် Row Barrier Terminal နှင့်အဝတ်တန်ဆာကိုချွတ်
PCB အမျိုးအစားလူပျို Row Barrier Terminal နှင့်လုပ်ကွက်
Power က Terminal နှင့်လုပ်ကွက်
Power က Splicer Terminal နှင့်လုပ်ကွက်
ပါဝါကိုလုံး Terminal နှင့်လုပ်ကွက်
Power က Splicer လုံး Terminal နှင့်လုပ်ကွက်
ပါဝါကိုဖြန့်ဖြူး Terminal နှင့်လုပ်ကွက်
ယူရိုအမျိုးအစား Terminal နှင့်လုပ်ကွက်တဆင့် Feed
F-0632G-XX 6x30mm 250V Glass ကို Ferrule ဖျူး
F-1038C-XX 10x38mm 500V ကြွေ Ferrule ဖျူး
အစိုင်အခဲပြည်နယ် Relay-လူပျိုအဆင့် SSR
အစိုင်အခဲပြည်နယ် Relay-သုံးအဆင့် SSR
အဆုံး Clamp / အဆုံးကွင်းစ / အဆုံးအဆို့
Power ကပျက်ကွက် Indicator
ရထား Adapter ကို din
terminal Block ကိုလျင်မြန်စွာ Connector
15 အင်တာနေရှင်နယ် Lighting စက်မှုလက်မှုပြပွဲ - Expolux 2016
Solid State relay (SSR) ကဘာလဲ?
Terminal နှင့်လုပ်ကွက်များအတွက်သင့်လျော်သော torque တန်ဖိုးများဘာတွေလဲ?
ယင်းက TA စီးရီး Terminal နှင့် Block ကိုများအတွက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းကိုရှာဖွေဘယ်လိုနေသလဲ?
အဆိုပါ Terminal နှင့်လုပ်ကွက်များအတွက်သင့်လျော်သောသုံးပြီးအခြေအနေများနှင့်အပူချိန်ဘာတွေလဲ?
ငါ Din ရထား၏ဘယ်အမျိုးအစားကိုသုံးပါသင့်သလဲ
သင်သည်သင်၏ Terminal နှင့်လုပ်ကွက်များအတွက်မည်သည့်အဖုံးများရှိပါသလား?
အဆုံး Clamp ၏ဘယ်ကြင်နာငါသည်ငါ့ Terminal နှင့်လုပ်ကွက်ဖြင့်အသုံးပြုသင့်သလဲ
ငါဘယ်လိုသင့်ရဲ့ quotation အရပါသလဲ?
ငါ terminal ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုများဘယ်အမျိုးအစားကိုရွေးချယ်သင့်သလဲ
Terminal နှင့် Block Connector ကဘာလဲ?
ငါဘယ်လိုငွေပေးချေ "ထွန်းလင်း" ကိုစေနိုင်သနည်း
သငျသညျ Terminal နှင့် Block ကိုအဘို့အဖုံးများရှိပါသလား?
Terminal Block '' အဖြေ,
Home အမျိုးအစား ပစ္စည်းများ အပူစုပ်ခြင်း
Fixed Terminal နှင့် Block
တီဘီစီးရီး Terminal နှင့် Block ကို Panel ကို Terminal နှင့် Block ကိုတပ်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်, အ spec 3/4/6/12 ဝင်ရိုးစွန်းနှင့်အတူ 600V, 15A / 25A / 35A ဖြစ်ပါတယ်။
ကြွေ Terminal နှင့် Block
ကြွေ Terminal နှင့်လုပ်ကွက်မြင့်မားတဲ့အပူချိန်အခြေအနေဝါယာကြိုးချိတ်ဆက်မှုအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ spec: 15A / 20A / 50A / 65A ။
Shining E&E အပူစုပ်ဝန်ဆောင်မှုနိဒါန်း
SHINING E&E INDUSTRIAL CO., LTD ကျော်ကို 35 နှစ် experence နှင့်အတူထိုင်ဝမ်အပူစုပ်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ 1978 ကတည်းကပါဝါဖြန့်ဖြူးစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအတွက်, Shining E&E အရည်အသွေးမြင့်အပူစုပ်ထုတ်လုပ်မှုဝန်ဆောင်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ကမ်းလှမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့် 35 နှစ်အတွေ့အကြုံနှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူ Shining E&E ကအမြဲအသီးအသီးဖောက်သည်ရဲ့ဝယ်လိုအားတွေ့ဆုံရန်သေချာပါစေ။
Shining E&E သင်ကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြားအရည်အသွေးကိုထုတ်ကုန်ကြည့်ရှုရန် နှင့်အခမဲ့ခံစားရ ဆက်သွယ်ရန် ။
Solid State Relay (SSR) အတွက်
Solid State Relay သည် SHINING- အပူစုပ်
အစိုင်အခဲပြည်နယ် Relay (SSR) တစ်ဦးခေတ်မီအီလက်ထရောနစ်အစိတ်အပိုင်းများကိုဖြစ်တယ်, ဒါစနစ်ကအအေး SSR များအတွက်အရေးအပါဆုံးအရာဖြစ်ပါသည်, ကြောင့်မြင့်မားတဲ့အလုပ်လုပ် temperture ဧရိယာထဲမှာမှကျိုးပဲ့ခြင်းလွယ်ကူသည်။ SSR များအတွက်အပူစုပ်၏ develpoe အများအပြားမျိုးထွန်းလင်း။
HS-60050: လူပျိုအဆင့် Solid State Relay တစ်ခုမှာ (1) အပိုင်းအစသည်
HS-60100: လူပျိုအဆင့် Solid State Relay နှစ်ယောက် (2) အပိုင်းအစသည်
HS-60150: လူပျိုအဆင့် Solid State Relay ၏သုံး (3) အပိုင်းအစသည်
HS-60200: လူပျိုအဆင့် Solid State Relay ၏လေး (4) အပိုင်းအစသည်
HS-80050: သုံးခုအဆင့် Solid State Relay တစ်ခုမှာ (1) အပိုင်းအစသည်
HS-80100: သုံးခုအဆင့် Solid State Relay နှစ်ယောက် (2) အပိုင်းအစသည်
HS-80150: သုံးခုအဆင့်သုံး (3) အပိုင်းအစ Solid State Relay သည်
HS-80200: သုံးခုအဆင့်၏များအတွက်လေး (4) အပိုင်းအစ Solid State Relay
၏အပူလွန်ကျူးဘို့ Solid State Relay (SSR) , သငျသညျကို install လုပ်နိုင်ပါတယ် Solid State Relay တွေနဲ့ ဝါသနာရှင်အေး ဟာအပူစုပ်ပေါ် ။ အပူစုပ်ခြင်း နှင့်ဝါသနာရှင်အေး Solid State Relay များအတွက် optional ကိုအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ပါသည် ။
1. 10A Solid State Relay: အပူစုပ် နှင့်ဝါသနာရှင်အေး မလိုအပ်ပါဘူး။
2. 25A Solid State Relay: ဤအပူစုပ်နှင့်အတူညီလာခံ ။ ဝါသနာရှင်အေး မလိုအပ်ပါဘူး။
3. 40A Solid State Relay: ဤအပူစုပ်နှင့်အတူညီလာခံ ဝါသနာရှင်အေးနှင့်အတူ ။
ကျနော်တို့အတွေ့အကြုံတွေအပြည့်အဝနှင့်အတူ, 1978 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး,...
ကျနော်တို့ Are အဘယ်မှာရှိ
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံနယူးထိုင်ပေမြို့, ထိုင်ဝမ်တွင်တည်ရှိသည်။ 40 မိနစ်လေဆိပ်ရောက်ရှိဖို့။...